हामीले सिफारिस गरेका वास्तविक घटनाहरूमा आधारित पुस्तकहरू वर्तमान साहित्य
वास्तविक घटनाहरूमा आधारित पुस्तकहरू
पुस्तक छनौट गर्दा त्यहाँ धेरै साहित्यिक विधाहरू छनौट गर्न सक्छन्। जे होस्, ती मध्ये एक "वास्तविक तथ्यहरू" हो। त्यो हो, हामी त्यस्ता पुस्तकहरूको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं जहाँ वास्तविक जीवनमा भएको कहानी भनिएको छ। यी पुस्तकहरूले वास्तविक घटनाहरूमा आधारित प्रभाव पार्छ किनकि तपाईं वास्तवमै के भएको हो भनेर थाहा पाउँदै हुनुहुन्छ।
वास्तवमा, हामी को भीड पाउन सक्छौं वास्तविक घटनाहरूमा आधारित पुस्तकहरूको उदाहरण, अरूलाई भन्दा केहि राम्रो चिनिन्छ। के तपाईं ती मध्ये केही जान्न चाहानुहुन्छ?
1 वास्तविक घटनाहरूमा आधारित पुस्तकहरू, के तिनीहरू सँधै विश्वासी भएका हुन्छन् के भएको छ?
2 वास्तविक घटनाहरूमा आधारित उत्तम पुस्तकहरू
2.1 सुन्तला नयाँ कालो छ
2.3 वास्तविक घटनाहरूमा आधारित पुस्तकहरू: त्रासले यहाँ बस्दछ
2.4 चिसो रगत
2.5 सत्य घटनाहरूमा आधारित पुस्तकहरू: मायालु
2.6 आना फ्रान्कको डायरी
2.7 वास्तविक घटनाहरूमा आधारित पुस्तकहरू: फ्लारेन्सको दानव
2.8 तार केटीहरू
2.9 वास्तविक घटनाहरूमा आधारित पुस्तकहरू: एक्जोरिस्ट
2.10 मीठो गीत
वास्तविक घटनाहरूमा आधारित पुस्तकहरू, के तिनीहरू सँधै विश्वासी भएका हुन्छन् के भएको छ?
हामी तपाईंलाई यो बताउन माफी दिन्छौं कि त्यहाँ यस प्रश्नको उत्तर सजिलो छैन। कारण यो हो कि यो प्रत्येक पुस्तकमा निर्भर गर्दछ, कसले यसलाई लेख्छन्, कसरी उद्देश्यको आधारमा ... यो घटना अवलोकन गरेको कसैले व्यक्तिद्वारा पहिलो व्यक्तिमा लेखिएको पुस्तक यो जीवित कोही व्यक्ति जस्तो छैन।
साथै, तपाइँ कहिलेकाँही सचेत हुनुपर्छ कथा पुस्तकमा निर्दिष्ट गरिएको अनुसार घटनाहरू घटेका थिएनन् भन्ने क्रममा कथा भन्न सकिन्छ। तर यो वास्तविकताको सब भन्दा नजिक हो (किनकि हामी वास्तविक घटनाहरूमा आधारित पुस्तकहरूको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं)। तपाईंले बुझ्नु पर्दछ कि यी रचनाहरू उपन्यास, पुलिस र पत्रकारिता अनुसन्धान, र एक व्यक्तिको अनुभवको संयोजन हो। त्यहाँ सबैको बीचमा एक राम्रो लाइन छ जुन तपाइँले राख्न सक्नुहुन्छ कि त्यहाँ राखिएका विवरणहरू छन् तर वास्तवमा यो आफैंमा महत्त्वपूर्ण थिएन, वा विवरणहरू छन् ताकि पाठक हराउँदैन।
अवश्य पनि, त्यहाँ अरूहरू भन्दा यथार्थपरक पुस्तकहरू हुनेछन्। तसर्थ, यदि तपाइँ यस विधालाई मनपराउनुहुन्छ, जुन हजारौं व्यक्तिलाई हिक गर्दछ, तब हामी केहि पुस्तकहरू प्रस्ताव गर्छौं।
वास्तविक घटनाहरूमा आधारित उत्तम पुस्तकहरू
ती मध्ये, हामी निम्न सिफारिस गर्न चाहन्छौं:
सुन्तला नयाँ कालो छ
सुन्तला नयाँ कालो हो: ...
२०१० मा लेखिएको पाइपर कर्मनले लेखेको यो कथाले तपाईंलाई पहिलो व्यक्तिको कथा सुनाउनेछ, किनकि यो आत्मकथा हो, पिपर कार्मेनको एउटी महिलाको लागुपदार्थको तस्करी र मनी सुप्रीनिंगको अभियोग यद्यपि उनले त्यहाँ पुग्नुको कारण बताउनुका साथै कैदीहरूसँग कस्तो व्यवहार गरिन्छ भन्ने कुराको पनि खण्डन गर्नुहोस्।
तपाईंले नेटफ्लिक्स श्रृंखला देख्नुभयो होला (जुन २०१ 2013 मा आयो) र यो एक गजबको सफलता थियो।
इसाबेल एलेन्डे द्वारा लिखित, तपाईले यसको पृष्ठहरू बीच पाउनुहुने कहानी उस्को हो आफ्नै छोरी, पोर्फेरिया र पक्षाघातले बिरामी। यस कारणले, उनी बताउँछिन् कि कसरी एउटी आमाले आफ्नी छोरीको समस्यासँग व्यवहार गर्दछ र यसले कसरी उनीसँग सम्बद्ध सबै मानिसहरूलाई असर गर्छ।
वास्तविक घटनाहरूमा आधारित पुस्तकहरू: त्रासले यहाँ बस्दछ
यहाँ लाइभ द ड्यारर। यो ...
१ 1977 inXNUMX मा जे एन्सनले लिखित, तपाईं भेट्नुहुनेछ ए एमिटीभिलमा श्रापित घरमा भएको हत्याको बारेमा थाहा पाइएको सबैको संकलन, एक स्थान जहाँ परिवार बस्ने र दावी गर्‍यो कि उनीहरूले आवाज सुने र presences महसुस गरे जसले तिनीहरूलाई सामान्य जस्तो व्यवहार गर्न बाध्य तुल्यायो। वास्तवमा, यदि तपाईं अधिक जान्न चाहानुहुन्छ भने, त्यहाँ ती घरहरूमा भएका हत्याहरूको बारेमा धेरै खबरहरू छन्, साथै साथै साँचो कथामा आधारित फिल्महरू।
यस केसमा, यहाँ के सय events० को दशकमा घटेका वास्तविक घटनाहरूको बारे थाहा छ भन्ने संकलन हो।
चिसो रगतमा: २ ... ...
वास्तविक घटनाहरूमा आधारित पुस्तकहरू मध्ये, यो एक Truman क्यापोटे को एक हुनु पर्छ। र यो यो हो कि यो एक बहु हत्याको कथा भन्छ जुन १ 1959 XNUMX in मा होल्कोम्ब शहरमा भएको थियो। वास्तवमा लेखक त्यो कथाको साथ यति व्याकुल भएको थियो कि उहाँ त्यहाँ रहनको लागि त्यहाँ सक्षम हुनको लागि त्यहाँ बस्नुभयो। यसको ईतिहासमा सकेसम्म उत्तम चित्रण गर्नुहोस्।
सत्य घटनाहरूमा आधारित पुस्तकहरू: मायालु
जाति, लिंग, र ...
यो सत्य घटनाहरूमा आधारित सबैभन्दा कम ज्ञात पुस्तकहरू मध्ये एक हो, तर यसले तपाईंलाई रंगका मानिसहरूले उनीहरूको भेदभावलाई कसरी व्यवहार गरे भन्ने बारे विचार दिन्छ। यो अवस्था मा, यस कथाले मिल्ड्रेड जेटर र रिचार्ड लभिंगको जीवन बताउँदछ, जो दम्पतीले १ 50 .० को दशकमा वाशिंगटनमा विवाह गरे।
दुबै बिभिन्न रंगका थिए, र त्यस समयमा उनीहरू एकै रातमा फरक छालाको लागि पक्राउ परेका थिए। जान्नुहोस् कि भर्जिनियामा मिश्रित विवाह निषेध गरिएको थियो।
आना फ्रान्कको डायरी: ...
यो पुस्तक, यसको आफ्नै लेखक, एनी फ्रान्क द्वारा लिखित, वास्तवमै उनले लेखेको डायरी हो उनको जीवन कस्तो थियो र हल्याण्डको नाजी कब्जाको समयमा एक यहूदी परिवार कसरी बाँच्यो भनेर भन्नुहोस्।
दिमागमा राख्नुहोस् कि उनले यो लेखेका थिए जब उनी तेह्र वर्षका थिए, तर बयान गर्ने तरिका र कसरी तपाईलाई समानुभूति मिल्छ र त्यो केटीले कस्तो महसुस गर्यो भन्ने महसुस हुन्छ। अवश्य पनि, यो १ 1942 1944२ देखि १ XNUMX .XNUMX सम्म छोटो अवधि हो।
वास्तविक घटनाहरूमा आधारित पुस्तकहरू: फ्लारेन्सको दानव
फ्लोरेन्स को राक्षस: ...
के तपाईं सिरियल किलरको बारेमा पुस्तक पढ्ने कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? ठ्याक्कै, तपाईले यहीँ पाउनुहुनेछ, वास्तविक घटनाहरूमा आधारित एउटा पुस्तक जसले फ्लोरेन्समा एक हत्याराको कथा बताउँदछ जसले २० बर्षसम्म जनसंख्यालाई तर्सायो।
उसले के गरे? उहाँ मन पराउनुभयो पृथक क्षेत्रहरूमा छुरा जोडी, किनभने ती क्षेत्रहरूमा यौन गतिविधिहरू गर्न गएका थिए। यसप्रकार उनीमाथि आठवटा दोहोरो हत्याको अभियोग लगाइएको थियो।
तार केटीहरू ...
जोर्डि सिएरा i Fabra द्वारा लिखित, यो बताउँछ कि एक पुस्तक हो के फेसन को दुनिया देखि नदेखीएको छ, त्यो हो, पर्दा पछाडि हुने सबै कुरा, मोडेलहरूमा कसरी दबाब दिइन्छ, उत्पीडन, ड्रग्स, रोगहरू ...
कथा डकुमेन्ट गरिएको छ, र एक कार्य प्राप्त गरेको छ जसले यसलाई पढ्नेहरूलाई असर पार्छ, तर ध्यान आकर्षण गर्दछ। थप रूपमा, यसले हामीलाई सोच्न बाध्य तुल्याउँछ कि जसरी यो फेसनको दुनियामा हुन्छ, यो टेलिभिजन, सिनेमा, साहित्य, आदि मा पनि हुन सक्छ।
वास्तविक घटनाहरूमा आधारित पुस्तकहरू: एक्जोरिस्ट
विलियम पीटर ब्लाटी द्वारा लिखित, यो वर्णन गर्दछ भयावह विधा बीचमा सबैभन्दा राम्रो कथित कथा। पुस्तकले यस फिल्मलाई प्रेरणा दियो, किनकि यसले १ 1949 12 in मा घटेका वास्तविक घटनाहरूको बखान गर्‍यो, जब १२ वर्षीया केटीलाई शैतानले पक्रेको थियो। उहाँलाई बाहिर निकाल्न उसको परिवारले एक एक्जोरसिस्टलाई कल गर्नुपर्‍यो, जस्तो कि तपाईंलाई थाहा छ त्यहाँ अझ धेरै कुरा थियो।
के तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईंले बच्चा सम्बन्धी सेवाहरू भाडामा लिनुभयो र एक दिन तपाईंले आफ्ना बच्चाहरूलाई मृत भेट्टाउनुभयो? खैर, यो तर्क हो कि लिला स्लीमनीले आफ्नो पुस्तकमा घटेका वास्तविक घटनाहरू बताउँछिन्।
La नानीको नाम योसलिन ओर्टेगा थियो र उनले दुई बच्चाहरूको हत्या गरे। पुस्तकमा लेखकले हामीलाई अभिभावकको कथा सुनाउँदछन्, कसरी उनीहरूले उनलाई काममा लिइन्, उनीसँगै बसिन् र देख्न थाले कि उनको व्यवहार त्यो घातक परिणाम सम्म परिवर्तन भइरहेको थियो।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » वास्तविक घटनाहरूमा आधारित पुस्तकहरू